Dubbii duraa Abiyi dubbateefi kan amma dubbate hagam walitti dhiihata? – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosDubbii duraa Abiyi dubbateefi kan amma dubbate hagam walitti dhiihata?
Dubbii duraa Abiyi dubbateefi kan amma dubbate hagam walitti dhiihata?
Dubbii duraa Abiyi dubbateefi kan amma dubbate hagam walitti dhiihata, dhaggeeffadha mee kijiba namicha kanaa
To sum it up “olmaya OPDO kan guyyaa arraa”
To use it in a sentence for example:
1) Lubbuun iskortaa hin qabdu
2) Najat Escort hin qabdu (ofiniin bobbahe gala)
3) Paasportiin tan Ameerikaan nuuf hirte
Afaan Hararge keessatti dubbatamu 4 ykn shaniin isiniif hikna! Harargeen madda iftoominaa fi sabboonnummaa ti… qashaa hunda!!!
Abiyyi fii OPDOn akka duula na filadhaa gochaa jiran hin dagatinaa. Dhagaa tokkoon shimbira lama ajjeesuu barbaadu. Jarri guguddaan jaalatamtuu sabboontuu Oromoo akka qodaa cabetti darbanii ji’a torbaaf irraanfatan adde Xayyibaa Hassan fudhatanii Harargee dhaqan. Hanga ammaatti Harargeen yeroo ajjeefamu, yeroo OPDO dullattii itti gad erganii doorsifamu hin yaadanne. Arra muddama cimaa keessa gallaan bakki dura deemuuf filatan achi. Maalif seetan? Eessaatu laafa? jennaan shilminn gara dirraa jette jedhu makmaaksatti. Oromoon Harargee gara laafa jechaa dhageenyaan dura isa amansiifachuuf achi deeman. Wanti isaan dagata garuu, Oromoon Harargee waan si duuba dubbatamu suma duratti akka sitti himuu dha. Nama duuba dubbatee achumaan hin usu. Akkana jedheen si hamadhee dubbiin san dhugaa dhaa? jedhee si gaafata. Wanti arra tahees sanuma. Kan lammataa Harargeen namaaf jedhee Rabbii isaa hin dhabu. Kanaas arra namni tokko jaratti himee ture. Jarri garuu iftoomina hin argisiifne.
Inumaa Abiyyi waan jedhe hin jenne jedhee haale. Waan hin jedhin immoo kanaan jedhe jedhee sobe. Filmiin jaraa asirratti gubate. Yoo isaatii Oromoon Harargee afaan Amaaraa hin beeku.
Gara biraatiin jaalatamtuu fi amanamtuu adde Adaanach Abeebee Baaletti ergatan. Kunis gama tokkoon jarri duula na filadhaa akka gochaa jiran agarsiisa. Gama kaaniin immoo aggaammii Jawar Mohammed irratti godhame ilaalchisee “damage control” gochuu barbaadan. Garuu, if dandamachiifnatti miidhaa biraa dabalachaa jiru. Akkuma baran badiirraa qulqulluu if gochuuf quba isaanii gama biraa qabuutu muldhata. Hanga ammaatti quba isaanii gama “diina” maqaan hin beekkaminitti qabaa turan. Ammammoo, Jawaruma Rabbi du’a jalaa baasetti qabaa jiru.
Amma yakka Jawar irratti raawwatame moggatti gatanii lubbuulee guyyaa itti aanu dabraniif Jawar irratti quba qabuuf yaaluu isaaniitu muldhata. Hundi isaanii waliif galanii Jawar taatee sana ummataaf gabaasuu duratti anagawootaf gabaasuutu irra ture. Osoo kana godhee ummanni hiriira hin bahu turee dha. Osoo ummanni hiriira bahuu baatee, lubbuun namoota hin darbu turee dha wanti isaan jechuu barbaadan.
Kun osoo dhugaa tahellee hangam takka dadhabbii sababeeffachuu akka qaban nutti agarsiisuu caalaa daa’imaa woggaa afuriillee amanasiisuu hin dandehu. Garuu, dhugaa miti. Jawar isaan caalaa dachaa kuma yaada. Nama isaan caalaa sadarkaa kuma itti gaafatamni itti dhagahamu tokko. Kanaaf waan isaan hin goone jedhan kana dursee godhuu isaa dubbatee jira. Shimallis dubbisee jira. Ajajaa komaandartichaa kan tahe itti-aanaa komishinara poolisii federaalaa dubbisee jira. Komaandartichaas dubbisee jira. Komaandartichi an ajaja fudheen dhufee. Ilmaan kankootin guddifadha jedhee waywaannaan namicha isa ajaje dubbise. Kana malees abbootii taaytaa kanneen yeroo biroo wajji haasawan dubbifnaan nuti waan beeknu hin qabnu jedhaniin.
Kana hunda eega godhe booda dhimmicha ala baase. #Hubadhaa: Jawar kana hunda gochuuf dirqama hin qabu ture. Abbaa fedheyyuu taanaan haala akkasii keessatti wanti dura sammuu namaatti uumamu haala ittin “survive” godhani. Osoo nama biraa tahee, osoo tarkaanfiilee Jawar fudhate hin fudhanne naa birmaadhaa jedhee iyyata. Jawar naa birmaadhaa hin jenne. Yoo humni hidhate kun tarkaanfii fudhate, nutis tarkaanfii ifirraa ittisuu akka fudhannu nuuf beekaa jedheeti barreesse. Rakkoo achi booda uumamuuf mootummaan akka ittigaafatama fudhatuus yeroodhuma sana beeysise. Kana caalaa maal haa godhu?????
Hoongattoonni OPDO waan tokko waan dhugaa tahe ka qabatanii ummatattiin gad bahan hin qaban. Garuu soba tokkicha kanatti goggoyfatanii afaan tokkicha kana dubbachuun isaanii waan isaan baasu itti fakkaata malee isaan miidhaa jira. Cabaarratti baqaqaa ida’achaa jiru. Namni isaan soban gonkumaa hin jiru. Dhimma kanaas qoratanii ummataaf himuuf yaada hin qaban. Dhimmichi lafee laagaa danqarte itti tahee jira. Yoo ni qoranna je’an, dubbiin hanga guddaa isaanii deemuufi. Yoo ni dhiifna jedhan immoo tokkoffaa ummata biratti ni tufamu. Lammaffaa, isaanuma keessa sabboontota dhimmi akka qoratamu barbaaduu jira. Jara kana gunachaas doorsisaas jiru. Jarri kun dhaabbii ummata baldhaa ilaalaa jira. Yoo ummanni jabatee mormii isaa itti fufe, jarri kun gama ummataa goruuf jiraatu. Yoo OPDOn duula jalqabde kanaan ummata amansiifachuu dandeesse immoo lubbuu isaanii baraaruuf jecha usuun ni mala.
Akka amma jalqabde kanatti OPDOn ufumaaf of yakkaa jirti. Akka Adaanech fii Taayyeen arra dubbatan kanati qubashee Jawaritti qabuun ragaa ofitti bahuu dha. Wanti dhoksuu barbaadan jiraachuu dha agarsiisa. Akka muumuchi ministeeraa arra sobee waan jedhe haale kanatti if salphisaa jirti. Namni isaan amanu ni xiqqaata. Haala kanaan sabboontonni carraa biroo argannaan OPDO akka kanniisa gaaguraa dhiisee mootii haaraa wajji bahetti mootii dullacha dhiisaanii gama ummataa dhufuuf jiraatan jedheen yaada.
OPDO dhumatteef yoon jedhe jerjera natti hin tahu.
Waa’ee masara mootummaa haaroomsuu fii siidaa minilik eessatti akka hojjatamee walumaa galatti daawwannaan masara mootummaa saba guddaa oromoo kan bakka hin buuneefii sirna nafxanyaa kan
Leellisu tahuu Gaazexeessaan #OMN duraanii obbo Dammaqaa Nagaasaa akkanatti ibsu
Hasswa #Taye_dendea godhee LTD SHOW gubatii dhagefadha
LTV WORLD: LTV SHOW : በፖሊስ የደረሰው ጉዳት ትንሽ ነው – ታዬ ደንደአ
OBN Onk 19, 2012 – Konfaraansiin Nageenyaa Magaalaa Shaashamanneetti bakka bu’oota godinaalee Booranaa, Gujii Lixaa, Gujii fi Arsii Lixaa hirmaachise taa’ame.
OBN Onk 19, 2012 -Konfaraansiin Nageenyaa Magaalaa Hararitti bakka Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahimad fi Ministirri Raayyaa Ittisa Biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa argamanitti taa’ame.
Dhugaan jiru kanuma Abbaa Gadaa Sanbatoo Bayyanee Dhimma Jawar Mohammediin wal qabatee marii OMN
Ambotti mormiin maaliif ka’e? Dhugaa jiru ifa baasaa!
የአምቦ ከተማ ወጣቶች ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድን በመቃወም አደባባይ ወጡ። ወጣቶቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ከአምቦ ከተማ ነዋሪዎች ጋር እያደረጉት በሚገኘው ውይይት ላይ “እንዳንሳተፍ ተደርገናል” በሚል ተቃውሟቸውን ማሰማታቸውን የዓይን እማኞች ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ በአምቦ በተዘጋጀው የሰላም ኮንፍረንስ ላይ ለመሳተፍ ወደ ከተማይቱ የገቡት ከመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ እና ከኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ጋር በመሆን ነው። አምቦ ከተማ በሚገኘው የአበበች መታፈሪያ ሆቴል ዛሬ ከጠዋት ጀምሮ ሲካሄድ በቆየው ኮንፍረንስ ላይ ከምዕራብ ሸዋ፣ ከደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ ቡራዩ፣ ሆለታ እና አምቦ ከተሞች የተውጣጡ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል።
ውይይቱ እየተካሄደ ባለበት ወቅት በአምቦ ዋና አውራ ጎዳና ላይ የተሰባሰቡ ወጣቶች ተቃውሟቸውን በግልጽ ሲያሰሙ ተደምጠዋል። “ቄሮዎች በስብሰባው ላይ መሳተፍ ነበረባቸው” የሚል ቅሬታቸውን ሲያቀርቡ የነበሩት ወጣቶች “የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ሲያቀርብ የቆየው ቄሮ እንጂ አሁን በስብሰባ ላይ የተሳተፈው አካል አይደለም” ማለታቸውን በስፍራው የነበሩ የዓይን እማኞች ለዶይቼ ቬለ ገልጸዋል።
ወጣቶቹ “አብይ እኛን ለማስተዳደር አይችልም፤ አሁንም ሊያታልለን ነው የመጣው” ሲሉ መደመጣቸውንም እማኞቹ ተናግረዋል። ወጣቶቹ ሲያሰሟቸው ከነበሩት መፈክሮች መካከል “ዳውን ዳውን አብይ፣ ዳውን ዳውን ቲም ለማ” የሚል እንደሚገኝበትም አስረድተዋል። በከፍተኛ ሁኔታ የታጠቁ እና ቀይ መለዮ ያደረጉ ወታደሮች በአምቦ አውራ ጎዳና ላይ ጥብቅ የጸጥታ ቁጥጥር ሲያደርጉ ታይተዋል።
አምቦ ባለፈው ሳምንት በመላው ኦሮሚያ ከተደረገ ሰልፍ በኋላ የ67 ሰዎች ሕይወት የቀጠፉ እና በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ለጉዳት የዳረጉ ግጭቶች ካስተናገዱ ከተሞች አንዷ ነች።
(ፎቶ – ከማህደር)
Walgahiin MM Dr Abiyyi fi M Ittisaa Obbo Lammaan Ambotti Guyyaa Har’aa Onk. 31/2019 Taasisan Mormii Kaase: SBO.
(SBO – Onkoloolessa 31,2019) Magaalaa Amboo keessatti walgahii MM Itophiyaa Dr.Abiy Ahmed faa geggeessaa jiran mormuun Qeerroo fi ummatni Amboo mormii agarsiisaa akka jiran namootni dubbisne mirkaneessaniiru. Amboo dabalatee ummatni keenya hedduun osoo dhumee jiruu, dhibbaan osoo qaamaa hir’atee jiruu walgahiin kaabinee fi kaadireen maqaa araaraan nu irratti walgeessuuf hin jiru jedhan QEERROOn hiriira mormii irra jiran.
Magaalli Amboo humna waraanaa haalaan guddaa tahe, matiresa, snipera, meeshaalee gugurdaa hidhateen weeraramtee jirti. Ummatni marfama kana keessatti sodaa malee qawwee jala dhaabbatee falmaa jira.
Ijoolleen “Abbaa Gadaa” Ijoollee “Abbaa Qawwee” taate!! Abbaan Jifaar deebi’ee dhufe!!
Amboo:Diinummaa hamaan uummata afaan Qawween haala kanaan doorsisuu caalu addunyaa kanarra hinjiru.